Umaki: imibono yomsebenzisi | Martech Zone
Umaki: imibono yomsebenzisi
Abantu e-UserVoice bebematasa besakha futhi behlola amathuluzi amasha ukukusiza ukuthi ubandakanye abasebenzisi bakho, uthole okungcono, impendulo eqhutshwa yidatha, futhi unikeze ukusekelwa okungcono kunangaphambili. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bebehlola amanye ala mathuluzi ngaphakathi kwamakhonsoli wabaphathi bamakhasimende abo e-UserVoice, kufaka phakathi amawijethi abo amasha we-Satisfaction nama-SmartVote, kanye nefomu lokuxhumana elisha, elilula. Namuhla, benza la mathuluzi amasha atholakale kuwo wonke umuntu! Hlangana nokusha,
Imibuzo Emihlanu Ngamasu Wokusetshenziswa Kokuqukethwe
NgoMsombuluko, Julayi 5, 2010 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ukuqhubeka nokuqhubeka ngiyabona ukuthi abanye onjiniyela bezokuxhumana abatshela izinkampani ukuthi akunandaba ukuthi babamba iqhaza kuphi ezinkundleni zokuxhumana, kuphela lokho abakwenzayo. Abanye bathi ukuthuthukiswa kwecebo lezokuxhumana ngaphambi kokuqala. Kunemibuzo emihlanu okudingeka uzibuze yona lapho udala okuqukethwe kuwebhu: Okuqukethwe kufanele kubekwe kuphi? - ipulatifomu obeka kuyo okuqukethwe kufanele yenzelwe izethameli ezihlosiwe wena